မင်းသားချော Lee Jong-suk ရဲ့ အချစ်ရေးအကြောင်း တစေ့တစောင်း – Trend.com.mm
Posted on April 9, 2018 by Noel
တောင်ကိုရီးယားမင်းသားချော Lee Jong-suk ဆိုရင် မသိတဲ့မိန်းကလေးပရိသတ်မရှိဘူးဟုတ်! သူသရုပ်ဆောင်တဲ့ဇာတ်ကားတိုင်း ပေါက်ခဲ့သလို ဇာတ်ကားတိုင်းရဲ့  မင်းသမီးချောတွေနဲ့ တွဲနေတယ်လို့တောင် သတင်းတွေထွက်ခဲ့ဖူးတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ဒီလို ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်မင်းသားလေးရဲ့ အချစ်ရေးက စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။သူ့ရဲ့ အချစ်ရေးကိုမပြောခင် သူ့ရဲ့ အကြောင်းလေး နည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
Lee Jong-suk ကို ၁၉၈၉ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာ ၁၄ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ မွေးရပ်မြေက တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ဂျောင်ဂီဒိုပါ။အရပ်အမြင့်က၁၈၆ စင်တီမီတာရှိပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကတော့ ပျမ်းမျှ ၆၅ကီလိုဂရမ်ရှိပါတယ်တဲ့။သွေးအုပ်စုကတော့ A ပါ။မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကတော့ သွေးအုပ်စုတူရုံနဲ့တင် ပျော်နေကြတာပါ။
၂၀၀၅ခုနှစ်မှာမော်ဒယ်လ်စလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဆိုးလ်မှာကျင်းပတဲ့ဖက်ရှင်ပြပွဲမှာ အငယ်ဆုံးအမျိုးသားမော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်အဖြစ်လူသိများလာခဲ့တာပါ။
သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို သိခဲ့တဲ့ YG အင်တာတိန်းမန့်က Lee Jong-suk နဲ့အတူ စတင်လက်တွဲခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ခုနှစ်မှာ ဇာတ်လမ်းတို Sympathy ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကို ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။၂၀၁၂မှာ School 2013 ဇာတ်ကားရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေ သဘောကျလက်ခံတဲ့မင်းသားတစ်လက်စတင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၃မှာတော့ I Can Hear Your Voice ၊ ၂၀၁၄ မှာ Doctor Stranger ၊Pinocchio ၊၂၀၁၆ မှာ W ၊၂၀၁၇ မှာ While You Were Sleepingဇာတ်လမ်းတွဲတို့ကို ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းစွဲမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ် ၂၀၁၈မှာတော့ Hymn of Death ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကို မင်းသမီးချော Shin Hye-sun နဲ့လက်တွဲပြီးရိုက်ကူးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
မင်းသားရဲ့ အချစ်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ သိကြမှာပါ။ Pinocchio ဇာတ်ကားထဲက တွဲဖက်မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ Park Shin Hye နဲ့လည်း
တွဲနေတယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ဖူးပြီး ၂၀၁၆မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ W မင်းသမီး Han Hyo Joo နဲ့လည်းတွဲနေတယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။သူတို့ကိုစုံတွဲဖြစ်စေချင်တဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်းမနည်းမနောပါပဲ။W ဇာတ်ကားမရိုက်ကူးခင် အချိန်တွေမှာလည်း သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ရင်းနှီးမှုကြောင့်ပရိသတ်တွေထင်တာလည်း မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ တွဲနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာမှရှင်းလင်းပြောထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Han Hyo Joo နဲ့ လက်တွဲလုပ်ရတာ သက်တောင့်သက်သာခံစားရတယ်လို့ Jongsuk ကပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတေ့ာ မင်းသမီးချော Han Hyo Joo က တောင်ကိုရီးယားမင်းသား Kang Do Han နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေတာလို့ သတင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
အခုလက်ရှိမှာတော့ Lee Jong Suk ရဲ့ ချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းအတိအကျမထွက်လာပေမဲ့ သူ့ရဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်မိန်းကလေးက မင်းသမီး Lee Na Youngလို ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်လို့ ၀န်ခံထားပါတယ်။Lee Na Young ကိုသဘောကျသူဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ အမျိုးသား မင်းသားချော Won Bin ဆီကနေ သူမရဲ့ လက်မှတ်တောင်တောင်းခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့။ပြီးတော့ Han Hyo Joo က သူသဘောကျတဲ့မိန်းကလေးပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံဖူးခဲ့ပါတယ်။
Lee Jong Suk ရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Kim Woo Bin ကတော့ Jong suk က သူ့မှာချစ်သူမိန်းကလေးမရှိသေးပေမဲ့လည်း လက်ထပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဆွေးနွေးရတာကိုကြိုက်တယ်လို့အင်တာဗျူးမှာဖြေခဲ့ဖူးပါတယ်။Jong Suk က သူ့ရဲ့ တွဲဖက်မင်းသားနဲ့မင်းသမီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေတာကိုမြင်ရင် လက်ထပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာပါတယ်တဲ့။မင်းသမီး Park Shin Hye နဲ့လည်းချစ်သူတွေလို့ ပရိသတ်တွေက ထင်နေကြပေမဲ့မကြာသေးခင်ကပဲ Park Shin Hye က ချစ်သူရှိကြောင်းတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အခုလက်ရှိ မင်းသား Lee Jong Suk ရဲ့ အချစ်ရေးကတော့ တစ်ယောက်တည်းပါပဲ။ အင်စတာဂရမ်မှာဓာတ်ပုံတွေတင်ရတာလည်း နှစ်သက်သူဖြစ်ပြီး ချစ်စရာအပြုအမူလေးတွေရဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အချစ်ကိုသိမ်းပိုက်ထားသူပါ။သူ့ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်ပြီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
တောငျကိုရီးယားမငျးသားခြော Lee Jong-suk ဆိုရငျ မသိတဲ့မိနျးကလေးမရှိဘူးဟုတျ! သူသရုပျဆောငျတဲ့ဇာတျကားတိုငျး ပေါကျခဲ့သလို ဇာတျကားတိုငျးရဲ့မငျးသမီးခြောတှနေဲ့ တှဲနတေယျလို့တောငျ သတငျးတှထှေကျခဲ့ဖူးတဲ့သူတဈယောကျပါ။ဒီလို ပြိုတိုငျးကွိုကျတဲ့ နှငျးဆီခိုငျမငျးသားလေးရဲ့ အခဈြရေးက စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။သူ့ရဲ့ အခဈြရေးကိုမပွောခငျ သူ့ရဲ့ အကွောငျးလေး နညျးနညျးမိတျဆကျပေးပါမယျ။
Lee Jong-suk ကို ၁၉၈၉ခုနှဈ၊စကျတငျဘာ ၁၄ရကျနမှေ့ာမှေးဖှားခဲ့တာဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ မှေးရပျမွကေ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံ၊ဂြောငျဂီဒိုပါ။အရပျအမွငျ့က၁၈၆ စငျတီမီတာရှိပွီး ကိုယျအလေးခြိနျကတော့ ပမျြးမြှ ၆၅ကီလိုဂရမျရှိပါတယျတဲ့။သှေးအုပျစုကတော့ A ပါ။မိနျးကလေးပရိသတျတှကေတော့ သှေးအုပျစုတူရုံနဲ့တငျ ပြျောနကွေတာပါ။
၂၀၀၅ခုနှဈမှာမျောဒယျလျစလုပျခဲ့တာဖွဈပွီး ဆိုးလျမှာကငျြးပတဲ့ဖကျရှငျပွပှဲမှာ အငယျဆုံးအမြိုးသားမျောဒယျလျတဈယောကျအဖွဈလူသိမြားလာခဲ့တာပါ။
သူ့ရဲ့ အရညျအခငျြးတှကေို သိခဲ့တဲ့ YG အငျတာတိနျးမနျ့က Lee Jong-suk နဲ့အတူ စတငျလကျတှဲခဲ့ပွီး ၂၀၀၉ခုနှဈမှာ ဇာတျလမျးတို Sympathy ဆိုတဲ့ရုပျရှငျကို ရိုကျကူးခဲ့ပါတယျ။၂၀၁၂မှာ School 2013 ဇာတျကားရိုကျကူးခဲ့ပွီး ပရိသတျတှေ သဘောကလြကျခံတဲ့မငျးသားတဈလကျစတငျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၃မှာတော့ I Can Hear Your Voice ၊ ၂၀၁၄ မှာ Doctor Stranger ၊Pinocchio ၊၂၀၁၆ မှာ W ၊၂၀၁၇ မှာ While You Were Sleepingဇာတျလမျးတှဲတို့ကို ရိုကျကူးခဲ့ပွီး မိနျးကလေးပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးစှဲမငျးသားတဈလကျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ဒီနှဈ ၂၀၁၈မှာတော့ Hymn of Death ဆိုတဲ့ဇာတျကားကို မငျးသမီးခြော Shin Hye-sun နဲ့လကျတှဲပွီးရိုကျကူးနတေယျလို့သိရပါတယျ။
မငျးသားရဲ့ အခဈြရေးကိုစိတျဝငျစားတဲ့ပရိသတျတှကေတော့ သိကွမှာပါ။ Pinocchio ဇာတျကားထဲက တှဲဖကျမငျးသမီးဖွဈတဲ့ Park Shin Hye နဲ့လညျး
တှဲနတေယျလို့သတငျးထှကျခဲ့ဖူးပွီး ၂၀၁၆မှာရိုကျကူးခဲ့တဲ့ W မငျးသမီး Han Hyo Joo နဲ့လညျးတှဲနတေယျလို့သတငျးထှကျခဲ့ဖူးပါတယျ။သူတို့ကိုစုံတှဲဖွဈစခေငျြတဲ့ ပရိသတျတှကေလညျးမနညျးမနောပါပဲ။W ဇာတျကားမရိုကျကူးခငျ အခြိနျတှမှောလညျး သူတို့နှဈယောကျရဲ့ ရငျးနှီးမှုကွောငျ့ပရိသတျတှထေငျတာလညျး မဆနျးပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ သူတို့နှဈယောကျကတော့ တှဲနတေယျဆိုတဲ့သတငျးတှနေဲ့ပတျသကျလို့ ဘာမှရှငျးလငျးပွောထားတာမြိုးမရှိပါဘူး။ဒါပမေဲ့ Han Hyo Joo နဲ့ လကျတှဲလုပျရတာ သကျတောငျ့သကျသာခံစားရတယျလို့ Jongsuk ကပွောပွခဲ့ဖူးပါတယျ။နောကျပိုငျးမှာတေ့ာ မငျးသမီးခြော Han Hyo Joo က တောငျကိုရီးယားမငျးသား Kang Do Han နဲ့ခဈြသူတှဖွေဈနတောလို့ သတငျးထှကျလာခဲ့ပါတယျ။
အခုလကျရှိမှာတော့ Lee Jong Suk ရဲ့ ခဈြသူနဲ့ပတျသကျပွီး သတငျးအတိအကမြထှကျလာပမေဲ့ သူ့ရဲ့ စံသတျမှတျခကျြမိနျးကလေးက မငျးသမီး Lee Na Youngလို ပုံစံမြိုးဖွဈတယျလို့ ဝနျခံထားပါတယျ။Lee Na Young ကိုသဘောကသြူဖွဈပွီး သူမရဲ့ အမြိုးသား မငျးသားခြော Won Bin ဆီကနေ သူမရဲ့ လကျမှတျတောငျတောငျးခဲ့ပါသေးတယျတဲ့။ပွီးတော့ Han Hyo Joo က သူသဘောကတြဲ့မိနျးကလေးပုံစံမြိုးဖွဈတယျလို့ဝနျခံဖူးခဲ့ပါတယျ။
Lee Jong Suk ရဲ့ သူငယျခငျြးဖွဈတဲ့ Kim Woo Bin ကတော့ Jong suk က သူ့မှာခဈြသူမိနျးကလေးမရှိသေးပမေဲ့လညျး လကျထပျတာနဲ့ပတျသကျပွီးတော့
ဆှေးနှေးရတာကိုကွိုကျတယျလို့အငျတာဗြူးမှာဖွခေဲ့ဖူးပါတယျ။Jong Suk က သူ့ရဲ့ တှဲဖကျမငျးသားနဲ့မငျးသမီး ပြျောပြျောရှငျရှငျရုပျရှငျရိုကျကူးနတောကို
မွငျရငျ လကျထပျခငျြတဲ့စိတျတှပေျေါလာပါတယျတဲ့။မငျးသမီး Park Shin Hye နဲ့လညျးခဈြသူတှလေို့ ပရိသတျတှကေ ထငျနကွေပမေဲ့မကွာသေးခငျကပဲ Park Shin Hye က ခဈြသူရှိကွောငျးတရားဝငျကွညောခဲ့ပါတယျ။အခုလကျရှိ မငျးသား Lee Jong Suk ရဲ့ အခဈြရေးကတော့ တဈယောကျတညျးပါပဲ။အငျစတာဂရမျမှာဓာတျပုံတှတေငျရတာလညျး နှဈသကျသူဖွဈပွီး ခဈြစရာအပွုအမူလေးတှရေဲ့ မိနျးကလေးတှရေဲ့ အခဈြကိုသိမျးပိုကျထားသူပါ။သူ့ရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျပွီးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ရဲ့အတွေး၊ အမြင်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ